China, Yakasarudzika, Hunhu hweVakuru tutu, Mutengo, Vatengesi, Fekitori - Shenzhen Ritter Star Technology Co LTD
bhuruu pancake tutu
Dhizaini yeBlue Pancake Tutus Inotengeswa yakafanana ne "Pfuma" .Iine: Rhinestones dzakapfuma! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakagadzirwa nemachira ejasi, ichiita kuti muviri uratidzike kunge wakatsetseka, wakanaka uye wakanaka; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakanyanya kubatana uye nyanzvi; Akakura gradi dhizaini! Mamwe akapfava uye akazara mavara, akanaka kwazvo!
yepepuru pancake tutu
Iyo yekufemerwa dhizaini yePurple Pancake Tutu inouya kubva kuBauhinia Starlight uye Galaxyâ €. Ine: yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakanyanya kubatana uye nyanzvi; Akakura gradi dhizaini! Mamwe akapfava uye akazara mavara, akanaka kwazvo!
Dhizaini yeBhalinaina Pink Tutus Inotengeswa yakafanana ne "Pfuma" .Iine: Rhinestones dzakapfuma! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakagadzirwa nemachira ejasi, ichiita kuti muviri uratidzike kunge wakatsetseka, wakanaka uye wakanaka; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakanyanya kubatana uye nyanzvi; Akakura gradi dhizaini! Mamwe akapfava uye akazara mavara, akanaka kwazvo!
yero pancake tutu
Dhizaini yeYellow Pancake Tutus Yekutengesa yakafanana ne "Peach velvet" .Iine: Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakabatana uye nyanzvi; Akakura gradi dhizaini! Mamwe akapfava uye akazara mavara, akanaka kwazvo!
mukuru ballerina tutu
Iyo dhizaini dhizaini yeVakuru Ballerina Tutu inouya kubva â € œAcaciaâ € .Iine: Pfuma rhinestones! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakagadzirwa nemachira ejasi, ichiita kuti muviri uratidzike kunge wakatsetseka, wakanaka uye wakanaka; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakanyanya kubatana uye nyanzvi; Akakura gradi dhizaini! Mamwe akapfava uye akazara mavara, akanaka kwazvo!
ballet platter tutu zvipfeko
Dhizaini yeBallet Platter Tutu Costumess Inotengeswa yakafanana ne "Crown" .Iine: Rhinestones dzakapfuma! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi.